Teny Quechua Andefasana ny Fientanan-kafaliana Hilazana ny hoe “Gooooooooal” · Global Voices teny Malagasy
Teny Quechua Andefasana ny Fientanan-kafaliana Hilazana ny hoe “Gooooooooal”
Voadika ny 03 Oktobra 2017 2:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, русский, Français, English
Noho ny ezaka nataon'ireo fampielezampeo roa mizara ny fandaharany ao amin'ny Youtube, tsy ela akory izay, vitan'ireo mpankafy ny ekipam-pirenena baolina kitran'i Però miteny ny fiteny Quechua ny nanararaotra ny fotoan-dehibe iray fifanintsanana ho fiadiana izay ho Tompondaka Erantany mba hampiasàna ny teny Quechua tany anatn'ny fanehoankevitra.
Mety mifampizara fiaviana amin'ny teny Espaniola ny teny Quechua milaza ny hoe “goal”, nefa fiteny roa samihafa ireo. Ny Quechua no be mpiteny indrindra any amin'ireo vazimba teratany ao Amerika Atsimo, isan'izany ireo Peroviàna 3 tapitrisa mahery.
Miha-manatona ny haha-mpandray anjara azy amin'ny fiadiana izay ho Tompondaka Erantany hatao ao Rosia amin'ny 2018, taorian'ny fandresena 2 noho 1 azony nanoloana an'i Ekoatora ny 5 Septambra 2017 teo, lalao roa sisa no miandry an'i Però ao anatin'ity fifanintsanana ity. Raha ny marina dia laharana fahefatra no misy an'i Però, izay mametraka azy ho eo alohan'ireo mantajaka hatrizay tao amin'ny faritra, toa an'i Arzantina.
Ireo ezaka ireo dia asan'ny Indigenous Audiovisual Association – Inkari sy ny Interactiva Medios, afaka miverina mijery ireo lalao ny mpankafy, amin'ny alàlan'ny lahatsary iray famintinana amin'ny teny Quechua ao amin'ny Youtube ny lalao tsirairay.
Onjampeo iray hafa, Radio Peruana Unión, koa no nandefa manontolo ny lalao tamin'ny fiteny roa miaraka, Quechua sy Spanish, nandritra ny fitantaràny mivantana sy tao amin'ny aterineto, namahana ihany koa ny momba izay niseho tany ambadiky ny sehatra tany nampiseho ny fihetsehampo natraky ny fanambaràna ireo baolina roa tafiditra. Misy ihany koa lahatsary iray amin'ny fiteny Quechua fampahafantarana ny lalao manontolo tany aloha nifanandrinan'i Però tamin'i Bolivia mpifanolo-bodirindrina aminy, izay nampiasàna ihany koa ny teny Quechua.
Tantaran'ny Però farany
Zava-misy niadian-kevitra: ‘Bombtrack’ sy ny ady mitam-piadiana anatiny ao Però
Mediam-bahoaka 1 herinandro izay
Bolivia 3 herinandro izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Jona 2021